Lamba fandroana ao Calistoga: Ny zavatra tokony ho fantatra
Mandeha mitsilaila sy lobaka ao Calistoga, Californie
Azonao atao ny mandray fandroana fotaka ao Calistoga, Californie. Mety manontany tena ianao raha toa ka asa izay mitaky bebe kokoa amin'ny ankizy sy ny elefanta kely noho ny anao fa tsy mandeha intsony. Vakio ny fikarohana mba hamantarana ny fandroana fotaka ary nahoana ianao no te hanandrana iray.
Afaka mahita fotaka manerana ny tany ianao. Miseho izy ireo na aiza na aiza toerana ahitana loharano mafana sy volkano volontany: avy any Nouvelle Zélande mankany amin'ny Nosy Ischia akaikin'i Naples.
Miaraka amin'ny reny Neny izay manome ny endriky ny zava-maniry, tsy mahagaga raha i Calistoga no kapitol batisan'ny fanjakana. Valo tapitrisa taona lasa izay, akaikin'i Mt. Nipoitra i Konocti, nanafoana ny faritra tamin'ny volkano lavenona. Nipoitra koa ny kitrokelin'ny tany, ka namela loharano sy loharano mafana. Raha ny marina dia i Calistoga no mipetraka amin'ny iray amin'ireo mason-tsivana miverimberina miverimberina eran'izao tontolo izao.
Nahoana no maka rano iray fotaka?
Ny antony tena mendrika indrindra haka rano fotaka dia ny fialan-tsasatra. Ny menaka dia malefaka ary mafana ary mihevi-tena toy ny bodofotsy. Miala sasatra ianao, mihantona eo ambany sehatra. Ireo rehetra ireo dia maneso fotsiny ny adin-tsaina.
Ny hafanana dia manosika anao hanadio sy hanadio ny vatana. Ny tombony ara-pahasalamana dia tsy voaporofo, fa ny olona milaza fa ny fandroana fotaka dia hanatsara ny endrikao, hanamaivana ny fanaintainan'ny fiaraha-miory sy ny muscle ary hanala poizina amin'ny vatany.
Inona ny ao anaty fotaka?
Nampiasa volkano volkano sy loharano mafana ny Indianina Wappo Indiana, mba hahazoana rano mangatsiaka.
Ny mpanorina an'i Calistoga Sam Brannan no voalohany namoaka ny hevitra, fotoana fohy taorian'ny Gold Rush. Saingy tsy tamin'ny taona 1946 vao tonga tany Calistoga i John "Doc" Wilkinson, tanora mpitsabo, ka nanjary anisan'ny faritra maharitra tao Calistoga ny fandroana fotaka.
Nanamboatra toeram-pisakafoanana i Wilkinson mba hanomezana fanampim-pahasoavana fanampiny ho an'ireo marary sy olon-kafa, ary mbola eo anilany amin'izao fotoana izao.
Ny fomba fandroana fandroana fotaka dia matetika ampiasaina ao Calistoga amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny lavenona volkano, loharano mafana, ary môtô fotsy. Ny ankamaroan'ny toeram-pitsaboana Calistoga dia manampy siramamy aromatherapy, toy ny lavender na eucalyptus.
Ny spa dia mitondra ny lavenona amin'ny maraina isa-maraina ary mampifangaro azy amin'ny rano mineraly manondraka avy amin'ny lohataona eo akaiky. Manampy trozona maniry hahatonga ilay fahatsapana malefaka sy hanampiana ny vatana. Ny rano mangatsiaka dia ampiasaina ihany koa mba hanamainana ny fifangaroana eo amin'ny mpanjifa.
Inona no mitranga mandritra ny fotaka?
Ao Calistoga, ny fizotran'ny fandroana fotaka dia tsy mitovy amin'ny toeran'ny spa izay nofidianao. Ho an'ny folo ka hatramin'ny roa ambinifolo minitra, ianao dia dibo-drano ary mihantona ao anaty fotaka mafana, izay matetika dia mihoatra ny 100 ° F. Ny mpanampy iray manampy anao hivoaka sy hijanona ary hitoetra eo akaikiny mba hanome rano mangatsiaka, fery kikobe ho an'ny masonao, ary fanadiovana lamba.
Ny fanandramana fandroana fotaka dia tsy mitovy amin'ny fitsaboana hafa amin'ny spa. Mamy sy mafana ny foto-tsakafon'ny fotaka, ary ianao dia misidina, tsy toy ny borka ao anaty rano, fa eo ambany elanelany, feno voahirana matevina. Angamba ny ankamaroantsika indrindra dia ho tonga amin'ny fahatsapana tsy fahita firy, tsy misy fanerena na aiza na aiza amin'ny vatana.
Rehefa misaraka ianao, dia miovaova ny toerana aleha. Ao amin'ny Doc Wilkinson, ianao dia maka balsa mineraly mineraly, ankafizo ny fitsaboana amin'ny efitrano fatoriana haingana ary avy eo ny fametahana bodofotsy mba hamela moramora ny vatanao.
Ny dingana manontolo dia tokony haka adiny 1,5 ora, ary mety haka fotoana ela kokoa raha mahazo fanafody avy eo.
Ho toy ny bodofotsy ve aho?
Amin'ny ankapobeny, betsaka kokoa noho ny lehilahy no tonga any amin'ny toeram-pisakafoanana Calistoga amin'ny fandroana fotaka.
Ny antony dia tianao hosasana ny fotaka:
Miala sasatra. Raha ny tena izy, heveriko fa io no fitsaboana mahafinaritra indrindra amin'ny fitsaboana izay nataoko hatramin'izay.
Mahafinaritra. Aiza koa no ahafahanao miondrika ary tsy mahita olana?
Ny olona sasany dia mianiana amin'ny alàlan'ny fahasalamana.
Ny fandroana fotaka dia tsy ho anao raha:
Raha mahatsapa ny fofona ianao, ny rano mineraly Calistoga dia manana volon-koditra avo lenta. Amin'ny teny tsotra, dia mamy toy ny atody rotsy izy.
Raha toa ianao ka claustrophobic: mety hahatsapa ho tsy mahazo aina ianao eo am-bozaka ao gooey, fotaka mainty.
Raha eo ambany fifehezan'ny dokotera ianao na inona na inona antony (anisan'izany ny maha-bevohoka): mijery azy ireo alohan'ny handehanana rano fandroana.
Toeram-ponenana maka aina ao Calistoga
Doc Wilkinson ihany no hany fitsangatsanganana fianakaviana ao Calistoga, miaraka amina trano amboaram-peo 50 sy fomba fiasa sy mpitaiza izay mahatsiaro tena ho mendrika anao.
Io no toerana tiako indrindra hialana amin'ny fandroana fotaka, ary ny hotely mifanila aminy koa dia mety tsara.
Safidy hafa dia ny Golden Haven, izay manana efitra manokana ho an'ny mpivady. Indian Springs misamboaravoara ny moron-tavy, mampametram-bolo ny muddier. Ny Calistoga Village Inn sy Spa dia ahitana tanimanga fotsy kely ao anaty fononteny. Ny Roman Hot Springs dia spa andro iray ao amin'ny Hotel Spa Resort Spa.
Ireo Kalisiana Tatsimo dia afaka misotro rano ao anaty fotaka (tena fandroana tanimanga mena) ao amin'ny Glen Ivy Hot Springs , izay nomena anarana hoe "Club Mud."
Ahoana ny fomba hanomanana toeram-pialan-tsasatra romantique
FAMPIANARANA: Spa-n'ny Round Hill any Jamaika
Ahoana no atao mba tsy hahatonga ny bevohoka amin'ny hara-tantely?
Inona no atao hoe reflexology?
10 Toeram-pisakafoanana goavana ho an'ny sakafo maraina na brunch any St. Louis
Fotoam-pialan-tsasatra maimaim-poana, filalaovana sy filalaovana ivelany ao Metro Detroit
Ny Items 8 Best Leather Bag Luggage mba hividy amin'ny 2018
Halloween any Lahaina, Maui
Top 6 hetsika isam-bolana ao Porto Rico tamin'ny volana Jolay
Fomban-drazana andro fankalazan'ny andro fankalazana manerana izao tontolo izao
Ireo sakafo 6 tsara indrindra any Milwaukee
Fivarotana an-tsokosoko miverina: Trick matetika mpitsoa-ponenana
Top tora-pasika ao St. John, Nosy Virijiny Amerikana
Boutiques sy fivarotana manokana ao Downtown Raleigh
Ny trano famakiam-bokom-bihy tsara tarehy Bettys
Manangana fiarahamonina iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fitetezana fiantraikany